Mac vs PC: Zvakaruramiswa here kuita uyu musiyano? | Linux Vakapindwa muropa
Kune nhaurirano pakati pekutaura Linux kunongedzera kune kernel kana iyo yakakwana sisitimu yekushandisa pachinzvimbo chekushandisa zita rekuti GNU / Linux, iyi hondo nyowani inobva kure ikozvino yave kujoina uye yakanditungamira kuti ndiite ichi chiratidzo. Uye ndezvekuti mumawebhusaiti mazhinji emitambo yemavhidhiyo, senge Steam, kana software, kusiyanisa pakati pePC, Mac neLinux…. ?
Chinhu chekutanga, iyo kusiyanisa pakati pePC neLinux chikanganiso chikuru, asi zvakajairika kwazvo munyika yemitambo yemavhidhiyo, sezvo iwo asiri mapuratifomu akasiyana. Iyo PC (Yega Komputa) inogona kuve neese maWindows, seimwe system inoenderana neLinux kernel, BSD, nezvimwe. Chinhu chaicho chekuita chaizove kusiyanisa pakati peWindows neLinux, asi kwete pakati pePC neLinux.
Asi pane chimwe chinhu chakatonyanya kundinakidza, uye ndiwo musiyano uyo wese anoita kunge anoita pakati peMac nePC. Pasati zvirinani yakashandisa PowerPC microprocessors panzvimbo yeIntel's x86. Asi ikozvino kunyange izvo hazvisiyanisa navo. Uye PC sekutaura kwangu, ndicho chirevo cheComputer Computer, chii chinoitika kuti maMac haasi ega makomputa? Zvichida munguva yakapfuura yakaita imwe pfungwa, chimwe chinhu chakasanganiswa pamusoro pemakore.
Un Mac ine Intel microprocessor Kunge chero imwe PC, iine makadhi emifananidzo eADD senge chero eayo asiri maMacs aunazvo kumba. Unogona kuisa kugoverwa kweLinux uye kunyangwe Mac OS X inogona kuiswa paPC…. Ipapo? Sei uchivasiyanisa?
Dai vakashandisa imwe mhuri ye microprocessors (SPARC, iyo yakanyangarika Alpha kana PA-RISC, iyo fashoni ARM, iyo PPC sepakutanga, ...) kana dai vaine chivakwa chitsva, pamwe zvaizove ruramisa ivo nekusiyanisa ivo kubva kune yechinyakare IBM PC. Asi pasina aya misiyano, zvinoita kwandiri kuti ingori kushushikana neApple kurwisa IBM uye nekugadzira zvigadzirwa zvavo "zvakasarudzika".
Semaonero angu ndizvo chikonzero chakakwana che "cascarte" zviuru zvemadhora kana madhora yehunyanzvi hwakaenzana neimwe nzira isingadhuri. Nekuti kana paine chinhu chimwe chinosiyanisa Mac nePC, iri mumutengo wakakwira wemakomputa pane block. Vamwe vese? Kushambadzira kwakachena uye unyengeri kuti vashandisi vabhadhare zvakawanda
Uyewo, umbozha hunotengesaKunyangwe zvichiratidzika kuva zvisinganzwisisike, kana iwe ukaisa zvigadzirwa zviviri, chimwe pamutengo wakaderera uye chimwe chakanyanya kudhura, ungangoshamisika kuti iyo inodhura inotengesa zvimwe ... Pamwe iyo yakachipa inosvika kuvanhu vasingakwanise kuwana chero chimwe chinhu, asi rega nditsanangure.
Handizive kana iwe wakamboona izvi zviedzo izvo zvavanoita pazasi pemugwagwa kwavanopa kuravira mairi anofungidzirwa maini (kana chimwe chigadzirwa), imwe yemhando iri nani pane imwe. Avo vanopa kuedza vanowanzoita chidzidzo ichi vachiratidza kune vanonaka kuti waini (yakachipa) inodhura. Chishamiso ndechekuti anenge munhu wese anosarudza iyo inonzi inodhura waini seyakanakisa pasina kuziva kuti ivo vari kunyatsosarudza yakashata yavo. Sei? Zvakanaka, bvunza ndiani anoda kutenga Mac pamusoro PC ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux vs. Windows » Mac vs PC vs Linux: chingori mubvunzo wemari
Ha ha ha ha ... mushure mekudhonza bvudzi rako, kumonera nekupopota kuratidza kuti macs zvakare PC, verenga runako urwu, «Sei? Zvakanaka, bvunza kuti ndiani anoda kutenga Mac pamusoro pePC… ».
Chinyorwa chakanaka, ndizvozvo chaizvo. Kune izvo macbook yakakosha, iwe unogona kutenga iri nani iri nani ultrabook kubva kune imwe mhando uye woisa GNU / Linux mairi
Pindura kuna Asturel
Ndinoziva nyanzvi dzinoshandura kuenda kuMac OS kubva kune rimwe zuva kuenda kune rinotevera uye kana iwe ukavabvunza ivo vanokuudza: nekuti zvinoshanda ... husimbe chaihwo;
Ini ndanga ndagara ndichifunga zvakafanana nezvandakaverenga muchinyorwa chino. Asi gore rakapera ndakatenga Macbook pro uye chinhu chega chandingataure ndechekuti handinzwisise kuti sei ndisina kunge ndachinjira kuMAC OS kare. Hongu zvinodhura asi chiitiko chacho chine hutsinye. Iine zvinhu zvekuvandudza hongu.
Alexander Lawrence akadaro
Ini handibvumirane zvizere nechinyorwa chino. Ine ndima ye «Mukufunga kwangu ndicho chikonzero chakakwana che" cascarte "zviuru zvemamiriyoni emadhora kana madhora kune tekinoroji yakaenzana neimwe nzira inodhura. Nekuti kana paine chimwe chinhu chinosiyanisa Mac nePC, iri mumutengo wakakwira wemakomputa pane block. Vamwe vese? Kushambadzira kwakachena uye hunyengeri kuti vashandisi vabhadhare zvakawanda. »Zviripachena kuti hauna kushandisa kana kukoshesa zvinhu zvakanaka zvemac uye uri inveterate linuxer, ini pachezvangu ndaizosiyanisa mac kubva pc nekuti zvakanyanya iko kusanganiswa kwe Hardware uye yakanakisa kugadzirwa software, uye ine yakanakisa mushandisi ruzivo (hapana chekuita fucking mirairo kana kuti iyo terminal inokundikana iwe) kuwedzera kwandiri, yakanakisa yekuvaka mhando. Ichokwadi kuti apuro inokwidza mitengo kupfuura zvakajairwa, asi zvakakosha kuti igadzikane uye intuitiveness yeiyo OS uye izvozvi munhu wese anoti ikopi yakachipa yemaharaBSD… ..
Pindura kuna Alejandro lorenzo
1-Ini ndashandisa Windows uye Mac OS X nekuti kushoropodza unofanira kutanga waziva zvinoshoropodzwa. Ini zvakare ndinofunga kuti munhu wese anogona kudzidza kubva kune wese munhu uye Apple ine zvinhu zviviri zvikuru: dhizaini uye Hardware-software optimization sekutaura kwako.
2-MuLinux unogona kushandisa rairo kana GUI, kwete chete zvinyorwa zvemhando. Uye kana iwe uchiishandisa, iyo terminal haiwanzo kutadza ... saka handizive zvaunoreva.
3-Kana zviri zvemitengo handitaure zvisina maturo. An iPad kana iPod kana iPhone kana MacBook,… vane kupenga mitengo. Iwe unobhadhara brand, hapana chimwezve. Uye kana usinga tarise kuti zvinoda marii kuzviita uye kuti vanozvitengesa zvakadii. Uye ini ndinofunga unogona kuda maMac, yega yega yakasununguka. Asi ini ndinofunga kuti vashandisi vezvigadzirwa zveApple havafanirwe kuve iBorregos vanobhadhara nekuvhara iyo yepamusoro, asi iwe unofanirwa kuratidzira uchipesana nemitengo inoshusha.
3-Uye nepo MacComputer kana iDevice isingatengese uye kuwacha mbatya kana kuhwina rotari, haina kukodzera kunzi zvakasiyana nePC. Icho chinyorwa ichi chiri nezve. Mimwe misiyano yakawanda ine mamwe asiri-x86 makomputa uye iwo haatize kubva kuPC kudomwa.
Asi munhu wese akasununguka kushandisa zvavanoda ...
Ruben Garcia akadaro
Iyo iPad ichienzaniswa nemamwe mahwendefa emakwikwi angati ine mutengo wakanyanya, unokwikwidza. Kwete chete iwe unofanirwa kutenga iyo yekupedzisira, iwe unogona kubhadhara iyo mini 2 iyo iri yakachipa uye inoshanda chaizvo mushe.
Ini ndaizowedzerawo bhenefiti yeIOS uye OS X kuvapo kwezvitoro, kunyanya muIOS uye tsika yakatsaurirwa kune wepakati mushandisi, yekureruka uye kugadzirwa izvo zvinoitawo kuti zvive nyore kushandisa mari, uyezve nekuti ivo vanowanzo kuve nezvakawanda mari, hongu.
Izvi zvinopa inoyevedza ecosystem kuvandudza maapplication uye imwe yenzvimbo dzinobatsira zvakanyanya kumuka kwevanamuzvinabhizimusi vadiki vane mazano akanaka, zvakakomba, huwandu hweOS X uye iOS zvinoshandiswa uye hunhu hwavo hazvifananidzwe uye zvese nekutenda kwazviri saizvozvo. uye yakabatanidzwa.
Pindura kuna Rubén García
Ini handisi Troll, ndichijekesa izvi ndinofanira kutaura kuti ini ndizvo zvavanodaidza mushandisi wepamusoro we linux kunze uko ... ndiko kuti: Ndakatanga kushandisa GNU \_ Linux muna 1996, uye ndashandisa GNU / Linux chete paPC yangu. kubvira 2003, zviri pachena kuti basa rangu rinotenderera nemaseva, kuchengetedza, kuona, nezvimwe. Nekufamba kwenguva ndakabvumikisa: LPI, RHCSA, RHCE, nezvimwe. 3 mwedzi yapfuura ndakakumbira zvishandiso nyowani kwandinoshanda, ini handina kubvunza imwe brand, ini ndakangopa zvirevo: SSD hard drive, 16 GB ye RAM, bhatiri rinogara angangoita maawa matanhatu, nezvimwe. Nzvimbo yekutenga yakandishamisa mwedzi wapfuura kuti michina yavakawana yakafukidza zvandaida yaive 6 ″ MacBook Pro uye yakaunzwa kwandiri; Maawa masere gare gare ini ndanga ndatova neUbuntu 15 yakaiswa. Pano nyaya inotanga: mushure mevhiki rese yakatsaurirwa kugadzirisa, zvaisaita kudzikisa kushandiswa kwesimba kusvika pasi pe8W. Ndakatanga ne15.04W. Rutsigiro rweHW rwainge rwatopera, iyo webcam chete ndiyo yainge isipo uye izvo hazvina kukosha, zvisinei, kuti bhatiri rakangogara chingori zvishoma kweinopfuura hafu yeawa, uye kuti michina yacho yaipisa zvine njodzi, handina kuifarira. Nyaya ine chekuita neyevhidhiyo kadhi uye mune ino modhi switch kune yechipiri vhidhiyo kadhi inofanirwa kugadzirwa kubva kuEFI, iyo isingatsigirwe zvizere uye zviri pachena kuti nyuchi haishande…. Zvisinei ... ini ndakaisa iyo Mac OS X Yosemite kumashure kutanga kubva pakutanga uye kumirira zvishoma kuti kuenderana kuve kwakakwana, panguva ino ndakatenda kuti ndinogona kutumira nekutambira maemail neiyi Mac OS, shandisa iyo Shell kupinda kuburikidza ssh kumachina angu uye ndoita basa rangu, nezvimwe.
Ndinofanira kubvuma kuti ndakashamisika, handina kutendeuka kure nazvo, asi zvinofanirwa kuzivikanwa kuti iyi sisitimu inoshanda, pane ino Hardware, inoshanda zvirinani pane zvandaitarisira. Kazhinji, zvese zviri nyore uye ini handina kumbobvira ndavhundutswa nekunyora nekugadzirisa zvinyorwa pazvinenge zvichidikanwa, kutaura zvazviri, ini ndakaisa ported Linux software pane iyi Mac ini ndakave nenguva dzangu dzakanaka, asi zvinofanirwa kuzivikanwa kuti pfungwa iriko kumashure kweMacs aya, uye vanoshanda, uye vanozviita nemazvo uye nekukurumidza. Ehezve iwo anodhura kwazvo, ichi chishandiso chiri kunze kwebhajeti rangu, uye dai zvisiri zvekambani iyi ndingadai ndisina kumboedza imwe yacho, asi ikozvino ndinofunga zvakakosha uye kuti pane zvakawanda zvekudzidza kubva vanoita zvinhu. Veterans mune chinamato ichi vanoti zvese zvisati zvave nani, handigone kufungidzira izvi. Zvinondiitira kusuwa kuti ndive nerinux mukati me mac os, asi parizvino handina dzimwe nzira.
Pindura kune cabetof
Chinyorwa chakadzika kwazvo. Izvo hazvitarise zvinhu zvakawanda senge mhando uye kusimba kwemac mac (izvo zvinoda mari) kupfuura iyo os (iyo inopa yakawanda).
Mac ndeye shit, mukati mayo mapenzi ese anodonha ayo anoda kufadza shamwari nevanoziva achiti nditengerei uyu, uri mukaka, asi havana zano rekuita nawo. Kune mamirioni emapenzi anoshandisa anodarika € 2000 paapuro kungo tarisa pa internet uye vasingazive zvimwe zvavanogona kuita muhari iyoyo. chimwe chinhu Linux uye OSX zvakavakirwa paUNIX kernell, ndiko kuti, ivo vana vapapa mumwe chete.
MAC zvishandiso zvakaronga nemaune kushaya nguva, senge EPSON brand printa, uye kunyangwe iri mhando yemhando ine magumo akanaka, hairegi kuve venyika yekushandisa, kushambadzira, yakanyanyisa uye isingafadzi capitalism iyo inobatsira mukusvibisa kwezvakatipoteredza munyika yechitatu. uye kubiridzira kwevana kuburitsa coltan ... Pane munhu anogona kufungidzira NASA kana vesaenzi kubva kuCERN kana iyo Yunivhesiti yeBerkeley vachishandisa MAC michina. Muminda yesainzi neinjiniya, maPC kana mamwe masisitimu ane asiri maIntel processor ayo asiri enharaunda yevatengi agara achishandiswa. Kune mac clones here? Kwete Kune maPC macombo ane zvikamu kubva kuzviuru zvemhando uye kubva kumapoka ese? Pakushayikwa kwenyika kweMAC, iwe unongofanirwa kuona zvinotevera zvinyorwa ... http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-documental/documental-comprar-tirar-comprar/1382261/
Chikonzero chechokwadi chete chekutenga chishandiso chemaapuro kubva mumaonero angu, ndechekuti kana iwe ukagadzira maficha emhando idzi dzemidziyo, kubhadhara mutengo weApple ye iPhone kana iPad kusetsa uchifunga kuti iOS ndiyo yakapusa sisitimu inoshanda pamusika. Kana iwe usingatendi kwandiri, edza kugovana mafaera pakati pe2 mafomu senge mafaera ePDF pakati peAdobe muverengi yeIOS neFoxit muverengi… Ehe haugone, iwe unofanirwa kuve nemafaira mamwechete pachinhu chako kaviri uye vanhu vazhinji vanoda edza dzakasiyana mhando dzekushandisa nechinangwa chimwe chete, senge mune ino pdf vaverengi, kuti uite izvi muIOS, unofanirwa kuteedzera ma pdf mafaera kune ese maapplication pane kutevedzera iwo kuchinhu uye kuti iwo maapplication anogona kuagovera iwo. Zvinosetsa chete. Ini ndinoshandisa iMac mune rangu basa, nekuti ndiyo michina iyo iyo kambani inotipa, asi seye webhu yekuvandudza, ini ndinoshanda kugadzira Virtual Debian kana Ubuntu server. Kutaura nezvezvigadzirwa zvemafoni ndinofunga kuti Android, Windows nhare (pamafoni emafoni uye mapiritsi), Firefox OS uye Ubuntu nhare kunyangwe iri diki, inzira iri nani zvakanyanya kumidziyo yeserura kunyanya kana uchishandisa windows, uye pamakomputa edesktop kana malaptop, chero Apple chigadzirwa chichagara chinodhura kupfuura zvazviri chaizvo, ndinofunga kuti ndezvemhando yepamusoro, asi hazvina kukoshesa mutengo, kune avo vanoti kunaka kwegungano uye Hardware, iyo mhando yekushandisa OSX kana chero Apple system ndiyo yakakosha zvakanyanya, kunze kwekushandira vatengi uye kutsvaga Apple Call Center mune chero guta riri pakati nepakati, ndine mhinduro kune avo vanhu: Tenga yepakati-renji Alienware. Kunyangwe Alienware ichizivikanwa nekuve komputa renji yakanangana nevatambi, ndizvo chaizvo izvo zvinovaratidzira nekuve neakanakisa Hardware kusanganisira eperiipherals senge keyboard, trackpad, odhiyo, skrini, nezvimwe. Windows 10 haisi yakaipa system uye chakanakisa ndechekuti idiki, ichine zvakawanda zvekukura izvo zvinogara zvakanaka uye kana iwe uchida chero imwe sisitimu inoshanda iri unix-linux yakavakirwa kana uri anti windows nekuda kwekuti iwe unoda kupesana uye unovenga windows uye wakarwadziswa nemawindows vista kana windows ME, unogona kuona kana kuita mbiri bhutsu kuve newindows uye ubuntu kana linux mint iyo yandinofunga 2 linux distros yakagadzikana uye ine hushamwari kune akajairika mushandisi, uye nezve vatengi, Alienware ndeyaDell uye inoitiswa navo unova mukana mukuru kuApple, Dell mune ruzivo rwangu ane basa riri nani revatengi uye kune zvakare nzvimbo dzeDell kwese kwese, mitengo yadzo inonzwisisika uye zvese izvi kunyangwe kana iri inodhura nekuti Alienware inowanzove nemidziyo yekumusoro-soro, haina kuenzanisa nemutengo unosekesa uye usina musoro weiyo 15 ″ MacBook Pro Retina, tisingatauri kuti zvirevo zvacho zvakaderera zvakanyanya kupfuura zveaArie chero nware.
Marc guitart akadaro
Alienware inorema 3 kilos uye inodya zvakapetwa kaviri saizi yemacbook pro… ramba uchiedza
Pindura Marc Guitart
Kutsoropodza Mac usina kumbobvira uine imwe zvakajairika. Ndine dhongi risina chinhu rekuronga pamashini eUnix apo mamiriro emifananidzo aisavapo, ndakagara kwemakore mazhinji neDOS neWindows uye ndakaona Linux ichikura. Mac Os X yaive yekufema uye mweya wemhepo yakachena Mon. Apple PPC michina zvakare, kunyangwe dzimwe nguva vaitadza, senge zvese zvimwe zvinhu. Asi nguva pfupi yapfuura ... ndinofunga Mac ari kutanga kuve izvo zvinoshoropodzwa nevazhinji. Chigadzirwa chepakati, chakagadzirwa nenzira yekuti chisingagadzirisike (semamwe akawanda maabooks) uye nehurongwa hwekushandisa hune mabhugi akawanda kupfuura Windows Vista akagadzirwa kuratidza account yazvino.
Uye zvinonyadzisa, nekuti mazuva akanaka ekare eMac anoita kunge apera, havasisiri iwo mabhomba-chiratidzo, akagadzirwa zvakanaka uye anoshanda michina. Asi pamusoro pezvose, neakanakisa mashandiro esisitimu ayo akatsunga kushandurwa kuita iOS.
Ndatenda kunaka kuti ikozvino kuriita kuti rishande 100% mune chero hackintosh iri mukati mekusvitswa nechero ani, uye mumushini uri nani pane chero Mac Pro, chimwe chinhu ndechekuti zvingave zvakakodzera kana kana zvichinge zvirinani kudzokera kuUnix ye hupenyu hwese.
Imwe nyaya ndeye Macbook malaptop. Ndo izvo izvo izvo musika zvinotipa isu, kungave Apple, Dell, Asus kana Toshiba, mitengo haina kusiyana zvakanyanya.
Usatombozvitaura. Ini ndashandisa zvigadzirwa zvemaapuro, kusiyana nevakomana vazhinji vanopenga veapuro avo vanoti isu vedu vanoshoropodza apuro havana kumbobvira vaine chigadzirwa chemapuro, ini ndakaedza apple uye rinongomwa! ipads, iphone, ipods uye macs apfuura nemumaoko angu, ini ndanga ndichironga mapeji ewebhu pane imac kwerinenge gore mune rimwe basa rapfuura randaive naro uye ikozvino vhiki rapfuura ndakawana mac mini, nechikonzero chiri nyore uye chakachena icho ini unoda kubatsirwa mune zvemari kubva kuapuro ecosystem, kunyanya kuvandudza yeIOS.
Asi senge yega yega yakanaka geek ini ndinoongorora zvese zvinowira mumaoko angu uye iyi mac mini yakanga isiri iyo, ndakaona kuti processor yainayo processor kubva muna 2013 (nerombo rakanaka kwandiri ndine sereferenzi PC yandakaunganidza kubva ku gore rimwe chetero) PC yangu ine AMD processor yazvino neyeiyo mac mini iyo A10 5800K nhema edition uye mumabenchmarks iyo AMD inorova kumashure kuIntel iyo inounza mac mini, tichifunga RAM ivo vakasungwa vese vane 8Gb pa1600Mhz. Mumifananidzo, kunyangwe hazvo iyo AMD A10 inounza magiraidhi ayo akakwirira kupfuura ayo eIntel i5, ini ndakakwanisa kuisa graphic yakazvimirira, iyo AMD hd 7750 uye mune mabhenji uyu graphic wePC yangu inopetwa mamakisi emifananidzo Intel iris 5100 uye muchikamu chekuchengetedza mac mini yangu ine 1Tb hard disk pa5400rpm, nepo PC yangu ichikwanisa kuisa 2 disks, 512gb HDD pa7200rpm uye 120gb solid state imwe.
Zvino kwauya chinhu chinonakidza, yangu mac mini yakandibhadharira approx. $ 860 dollars uye PC yangu yakaungana makore maviri nehafu ndisati ndatenga mac mini yangu, zvakanditengera madhora mazana mana nemakumi matatu. Zvingaitwe sei kuti apuro rakanditengesera komputa ine hafu mashandiro ePC yangu yemakore maviri nehafu uye nemutengo wakapetwa kaviri! hazvina kuitika kuti utende :(
Ini ndinonzwa kubiridzirwa uye kupusa, vakandidzidzisa uye vakandidzidzisa kuti mutambo unokunda uye unoratidza huchenjeri hwakawanda hunowedzera zvishoma, neApple ndinonzwa ndichirohwa, asi zvakadaro, ndinongofanira kugadzirisa uye kudzidza kuvandudza iOS uye kukwanisa dzosera izvi "kudyara."
Pindura kuna euticc
osx yakave nenguva yayo. Nhasi inotanga kutaridzika sedanda re linux pasina fungidziro, kutaura zvazviri kwakafanana nekuve ne smartphone yakatambanudzwa mumafomati edesktop. Tora smartphone, pfuudza pini inotenderera pamusoro payo uye une cocoon kana ruoko rwemaoko.
Zvakanaka, ini ndinofunga kuti MacOSX kunyorera (pasina kuve fanboy yechero ipi) ine dhizaini irinani pane iya yeGNU / Linux (ona Garageband uye imovie)
Kutaura muenzaniso, iyo Rosegarden yeGNU / Linux ine gui senge makumi masere / makumi mapfumbamwe Atari cubase asi muvara uye Garageband, zvakanaka, ndiani asingazvizive? Iyo ine intuitive, nyore kushandisa gui uye zviridzwa zvinoita kuti midi isanzwike kunge isina tsvina, uye inowanzove APP inouya kana iwe ukatenga pre-yakaiswa Mac uye neiyo yekudzorera diski inoisa iyo zvakare kana iwe uine fomati.
YeGNU / Linux yangu yaizoshaya Garageband (imwe nzira) iyo ihwohwo hwakareruka hwekushandisa / Nice dhizaini uye imovie (iyo yakavhurwa yakaitwa chimwe chinhu senge Imovie madingindira) neayo ini ndaigona kutotamira kuGNU / Linux (yeiyo yezviridzwa ini ndatova nedambudziko sf2 3.1 iyo kunyangwe kutora 1,5gb inonzwika zvakanaka)
Uye kupedzisa chimwe chezvinhu zvandisingade nezveGNU / Linux uye mashandisiro ayo ndechekuti iyo Qsynth (Fluidsynth interface) inotora uye inotakura iyo SF2 mundangariro (zvese), zvakadii kurodha runyorwa rwezviridzwa izvo unayo uye ubvunze Rosegarden / Qtractor / Muse ndezvipi zviridzwa zvinoiswa mukati meiyo midhi uye zvinoshandisa izvo chete?
Peter Carmona akadaro
Stop misinforming, trolo
Pindura Pedro Carmona